war – dulmidiid
Guddoomiyaha G/Banaadir oo xil ka qaadis ku sameeyay Khasnajigii Guud ee dowladda Hoose
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa wareegto xafiiskiisa ka soo baxday waxaa uu xil ka qaadis ku sameeyay Khasnajiga Guud ee dowladda Hoose ee Xamar C/raxiin Iimaan Jimcaale. Guddoomiye Taabid ayaa xilkan u magacaabay Haweeney lagu
Taliyaha Qeybta Booliiska Hiiraan Gornel Isaaq Cali Cabdulle Oo Sheegay in ay Baarayaan Qaraxii Shalay Ka Dhacay B/weyne
Taliska Booliiska Gobolka Hiiraan ayaa sheegay iney wadaan baaritaan ku saabsan qaraxii ismiidaaminta ahaa, kaasi oo shalay ka dhacay maqaayad ku taalla magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Taliyaha qeybta Booliiska Hiiraan Gornel Isaaq Cali Cabdulle oo la hadlay Dulmi
Ra’iisul Wasaare Sharmaake oo ka hadlay Go’aankii Qalbi-dhagax
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaake ahna Xubin ka tirsan Xildhibaanada Aqalka sare oo la hadlay Idaacadda VOA ayaa ka hadlay Go’aankii Dowladda Soomaaliya ay Itoobiya ugu wareejisay C/kariin Sheekh Muuse Qalbi-dhagax. Cumar C/rashiid Cali Sharmaake ayaa
Degmadda Waaberi oo Xalay ku guuleysatay tartanka kubadda-cagta ee degmooyinka Gobolka Banaadir 2017
Kooxda kubadda-cagta ee degmadda Waaberi ayaa Xalay si xaraga leh ugu guuleysatay tartanka kubadda-cagta ee degmooyinka Gobolka Banaadir ee sanadka 2017, kaddib makii 3-1 ay kaga adkaadeen kooxda kubadda-cagta ee degmadda Hodan. Laacibka kooxda Waaberi ee lagu magacaabo Muxudiin, ayaa
Dagaal u dhaxeeyo Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab oo ka dhacay Buur-hakaba.
Buur-hakaba-DDN-Dagaal Culus oo u dhaxeeya Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay degmada Buur-hakaba ee gobalka Baay. Wararka aan ka heleyno degmada buur-hakaba ayaa soo sheegayo in uu ka dhashay Khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac
Shaqaalaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa lagu amray in aysan warbaahinta la hadli karin ogolaansho la’aan, kaddib warqad ka soo baxday Xoghayaha Joogtada ee Wasaaradda Danjire Cali Maxamed Cali. Warqada oo soo baxday dhamaadkii bishii July ayaa waxaa lagu wargeliyay